जगंली च्याउले सिकाएको पाठ | Hulaki Online
२०७३ श्रावण १, शनिबार १८:२३
2020 Sep 18, Friday 11:00
जगंली च्याउले सिकाएको पाठ
लक्ष्मीप्रसाद पंगेनी ।
च्याउको स्वादको महिमा जिब्रोमा पनि झुण्डिएको पाइन्छ– च्याउ खाओस् न स्वाद पाओस् ! तर स्वादमात्र होइन, विषालु पनि हुन्छ च्याउ । प्रत्येक वर्ष वर्षायाम शुरुवातसंगै दुर्गम तथा पहाडी वस्तीमा जंगली च्याउको सेवनबाट विरामी वा मृत्यु हुनेको संख्यामा बृदि हुन थालेपछि सरकारले सार्वजनिकरुपमा विभिन्न संचार माध्यमबाट जंगली च्याउ सेवन नगर्न सबैलाई अनुरोध गरिरहेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग,इपिडीमीयोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा,टेकुले हालै जारी गरेको सार्वजनिक सुचनामा ‘देशका विभिन्न भूभागमा हालैका दिनमा विषालु च्याउको सेवनबाट २० जना भन्दा बढीको मृत्यु भईसकेको र धेरै जना प्रभावित भएको हुनाले जंगल,भीर,कान्ला,खोल्सा र बारीमा आफै उम्रने च्याउ धेरै जसो विषालु हुने र यसको सेवनबाट मृत्यु हुने सम्भाबना बढी हुने भएकोले जंगली च्याउको सेवन नगर्न’ भनिएको छ । सुचनामा ‘विगतका वर्षहरुमा पनि यस माहाशाखाबाट जंगली च्याउको सेवन नगर्न विभिन्न संचार माध्यमबाट सचेतनामुलक सन्देशहरु प्रवाह गरेको तर विषाक्त च्याउको सेवनबाट मृत्यु तथा विरामी हुनेको संख्यामा खासै कमी आउन नसकेकोले च्याउ खानै परे व्यवसायिकरुपमा खेती गरी उत्पादन गरीएका च्याउ मात्र सेवन गर्न’ अनुरोध गरिएको छ । तथापी जङ्गली च्याउको सेवन घटेको देखिन्न ।
नेपालको महाभारत पर्वत श्रृङखला लगायत तराई र हिमाली क्षेत्रमा च्याउ पाइन्छन् । नेपालमा पाइने १२ सय प्रकारको च्याउ मध्ये करिव १२ प्रतिशत मात्र खान योग्य छन् । सय भन्दा बढी प्रकारका जंगली च्याउ बिषालु भएको प्रमाणित भईसकेको छ । खान हुने र विषालु च्याउ हेर्दा उस्तै हुने हुनाले वर्षौ देखि जंगली च्याउ सेवन गर्नेहरु पनि झुक्किने गरेका छन् । विषालु च्याउको वरिपरी हुर्किएका अन्य खान हुने च्याउहरु पनि विषाक्त हुने गर्दछन् । केही जंगली च्याउ यति विषाक्त हुन्छन कि २० ग्राम देखि ५० ग्राम च्याउ मानिसको पेटमा पर्यो भने पनि मृत्युको कारक हुन सक्छ । ऋग्वेद,यजुर्वेद जस्ता पौराणिक ग्रन्थहरुमा पनि च्याउको विषाक्तताको वारेमा उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यसो त च्याउलाई औषधीको रुपमा पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ । नेपालमा पाइने च्याउहरु मध्ये करिव ७३ प्रजातिका च्याउहरुमा औषधिको गुण पाइने विज्ञहरु बताउँछन् । च्याउ अति नै पौष्टिकतत्वयुक्त,स्वास्थ्यबर्द्धक र स्वादिलो खाद्यवस्तुका रूपमा लिइन्छ । च्याउमा प्रोटिन,भिटामिनहरूमा थाइमिन,राइवोलेविन,नाइसिन,वायोटिन,एसकर्भिक एसिड,विभिन्न मिनरल्स,विभिन्न एमिनो एसिड आदि तत्वहरू पाइन्छ । त्यस्तै भिटामिन ए,बी,सी,खनिज र क्याल्सियम पनि पाइन्छ । वोसो नगन्य मात्रामा पाइने र च्याउमा स्टार्च नपाइने हुनाले च्याउलाई पौष्टिकतत्वयुक्त,स्वास्थ्यबर्द्धक खानाको रूपमा लिइएको हो ।
मात्र यहाँ समस्या के हो भने च्याउ पहिचानको । खान हुने र विषालु च्याउ पहिचान गर्न नसक्दा दर्जनौ मानिसहरुले आकालमा ज्यान गुमाउनु अत्यन्तै दुःखदायी अवस्था हो । यस वर्ष वर्षायाम शुरु भए एता मकवानपुर,पाँचथर,खोटाङ, पर्वत,पाल्पा,लगायत देशका विभिन्न भागमा विषालु च्याउ खाँदा २० भन्दा बढीले अकालमा ज्यान गुमाई सके भने दर्जनौ विभिन्न अस्पतालमा उपचारत छन् ।नेपालमा जंगली च्याउ खाने प्रचलन पुरानो भए पनि जंगली च्याउ सेवनबाट मुख्यतः तिन कारणले मानिसहरु मरेका वा विरामी परेका हुनसक्छन् । पहिलो विगतका वर्षहरुमा पनि जंगली च्याउ खाने गरेकोले खान हुने च्याउ र विषालु च्याउ छुट्याउन सक्ने दक्षता आफुमा भएको ठान्नु जुन दक्षताले यस वर्ष काम गरेन । दोस्रो मानिसहरुमा जंगली च्याउहरु प्रायः विषालु हुन्छन भन्ने शिक्षा र चेतना छैन । र तेस्रो जनमानसमा विषालु च्याउ छुट्याउन सकिने केही मान्यता र विधिहरु छन् जुन पूर्णतया वैज्ञानिक र प्रमाणित होइनन् । हालसम्म जंगली च्याउ खाएर मृत्यु वा विरामी पर्नेहरुमा प्रायः दुर्गम तथा पहाडी क्षेत्रका आर्थिकरुपले कमजोर अशिक्षित मानिसहरुको वाहुल्यता रहेको देखिन्छ । यसबाट पनि के भन्न सकिन्छ भने जंगली च्याउहरु प्रायः विषाक्त हुन्छन् र यसको सेवनले मानिसको मृत्यु पनि हुन सक्छ भन्ने संदेश ती दुर्गम ग्रामिण वस्तीहरुमा पुग्न सकिरहेको छैन । जहाँ गरिवी छ ,जहाँ अन्धविश्वास र रुढीवादी चिन्तनले जकडेको छ ,जहाँ शिक्षाको पहुँच छैन ,जहाँ सडक अनि संचारको सुविधा छैन,त्यस्ता वस्तीहरुमा केन्द्रमा रहेका केही संचार माध्यमबाट मात्र जंगली च्याउ खान नहुने सूचना प्रवाह गरेर मात्र हुदैन । यो संदेश हरेक गाउँको कुना कप्चेरामा पुग्नु पर्दछ । खान लागि प्रयोग गरिने च्याउकै कारणले सर्वसाधारणको अकालमा ज्यान जानु दःुखद मात्र नभई अत्यन्त लज्जाको विषय हो । जंगली च्याउ सम्बन्धी सचेतना नभएर हो कि घरमा खाने तरकारी नभएर हो वा दुवै नभएर हो,सोको कारण पहिल्याउन जरुरी छ । र समयमै रोकथामको पहलकदमीहरु चाले भविष्यमा जंगली च्याउकै कारणले हुने मानवीय दुर्घटनामा पक्कै कमी आउने छ । हुन पनि हो एक छाक तरकारीको जोहो गर्दा परिवारकै ज्यान जान सक्छ भने जंगली च्याउ किन खाने ? एक छाक जंगली च्याउ नखाएर केही हुँदैन,केही गुम्दैन तर खाएमा परिवार गुम्न सक्छ वा सर्वस्व गुम्न सक्छ । घरमा तरकारी खाने कुरा नभए नुन खुर्सानी वा गुद्रुकको झोलसंग पनि भात खान सकिन्छ । एक छाक तरकारीकै लागि वा स्वादका लागि वा जंगली च्याउ सम्बन्धी परम्परागत विधी र मान्यताको आधारमा जंगली च्याउ कुनै पनि हालतमा सेवन नगरौं । च्याउ खानै परे वा खान मन लागे घरमा कृतिमरुपमा उत्पादन गरिएका च्याउ मात्र सेवन गरौँ । जंगली च्याउ सचेतना सम्बन्धी सरकारी अभियानमा सबैले हातेमालो गरौँ ।
हुलाकीअनल़ाइन - २०७३ श्रावण १, शनिबार १८:२३